I-China Magnetic Grate Separator enabavelisi be-Multi-Rods kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Iibalo zeMagneticzakhiwa liqela leetyhubhu zemagnethi kunye nesakhelo sensimbi engenasici. Inokumiselwa kwizakhelo kwiindlela ezininzi, ezinje ngesikwere, uxande, ukujikeleza, okweqanda, unxantathu, irhombus okanye ezinye iimilo ezenziwe ngokwezifiso ukuze zilungele ufakelo olwahlukeneyo. I-Meiko Magnetics iyakwazi ukubonelela nge-Standard Normal Style Liquid, ukucoca ngokulula ulingo lwemagnethi yolwelos, Unxibelelwano olukhawulezayo ulingo lwemagnethi yolwelos, imigibe yemagnethi etshisayo kunye nabathengi benza umgibe wemagnethi. Ezifana nomgangatho wokutya okuzibamba ngemagnethi, ucoceko lomgibe womnatha, njl.njl. Amandla ombane wamagnetic anokufikelela kwi-13000gs evela kwiimagnethi ngeBr> = 14300Gauss.
Egqithileyo Isikwere Magnetic Square
Okulandelayo: Ityesi yeMagnetic